Ụbọchị My Pet » Olee otú Mmekọahụ Pụrụ Inyere Gị Aka Ndụ a Mma Life
Ịhụnanya & Mmekọahụ
site Jennifer Finney
Olee otú Mmekọahụ Pụrụ Inyere Gị Aka Ndụ a Mma Life
emelitere ikpeazụ: Jan. 16 2021 | 2 min agụ
Anyị niile maara nnọọ otú ezi mmekọahụ nwere ike na-eche ma ị maara na mmekọahụ bụ n'ezie ike ka ị na-?
Mmekọahụ enyere aka na-gị dịghịzi usoro na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị. Ndị na-Ugboro mmekọahụ n'ezie nwere ọkwa dị elu nke-alụso ọrịa ọgụ na chebe gị ahu megide germs, nje, na ndị ọzọ na intruders. N'ezie, ọ na-ikwu na ị na-anọ n'ọrụ, eri ike, ma na-ezu na-ehi ụra iji jide n'aka na gị dịghịzi usoro mụ obi ụtọ.
Mmekọahụ boosts libido. Inwe mmekọahụ ga-bụghị naanị ime ka ọ ka mma ma ọ ga-mma gị na libido. N'ihi na ndị inyom, na-enwe mmekọahụ na-enwekwu mmamiri lubrication, ọbara eruba, na elasticity, niile na-eme ka mmekọahụ na-eche mma mgbe eke a ọzọ ufiop agụụ.
Mmekọahụ lowers ọbara mgbali. E nwere nnyocha na-atụ aro na e nwere njikọ dị n'etiti nwoke na nwanyị na ala ọbara mgbali. Mmekọahụ na-lowers obi gị agha n'ihe ize ndụ. E wezụga na ihe ndị magburu onwe ụzọ na-obi gị ọnụego elu, mmekọahụ na-enyere aka na-akpụ na testosterone etoju na itule.
Mmekọahụ mkpa dị ka mmega. Ezie na ọ ga-eji dochie gị ahụkarị cardio mgbatị, ọ maa na-enyere. A, mmekọahụ asakde ise calories kwa nkeji na mgbakwunye na bumping gị obi ọnụego na iji dị iche iche uru.
Mmekọahụ nwere ike ibelata ihe mgbu. Ma ị na-azo a migraine ma ọ bụ mgbu, kama grabbing aspirin, na-agbalị na-orgasm. Mgbe orgasm, a hormone a tọhapụrụ na-enyere aka bulie gị mgbu ndidi. Ọbụna mkpali na-enweghị ihe orgasm pụrụ inye aka belata ihe mgbu.
Mmekọahụ nwere ike belata ndị Ohere na prostate cancer. A na-adịbeghị anya na-amụ mere site Journal nke American Medical Association na-ekwu na ndị ikom na-ejaculated ugboro ugboro (opekempe 21 ugboro a ọnwa) ndị na-erughị hà ga-prostate cancer.
Mmekọahụ mma ụra. Ndị mmadụ na-agbasaghị ịda n'ụra ngwa ngwa mgbe mmekọahụ, karịsịa bụ na e nwere onye orgasm aka. Mgbe otu orgasm, a hormone prolactin a tọhapụrụ nke bụ mma n'ihi na mmetụta nke ụra na-atụrụ ndụ.
Egbu, mmekọahụ na-enyere aka mfe nchegbu. Nso, n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ mmetụta uche, gị na onye òtù ọlụlụ ike ịfụ, nsogbu, na ala na nchegbu. Ọmịiko n'ahụ na-amakụ nwere ike hapụ a eke “na-eche-ezi hormone” mgbe mmekọahụ agụụ amps gị ụtọ na ụgwọ ọrụ usoro site atọhapụ a ụbụrụ chemical. Mmekọahụ na anụ ahụ na nke mmetụta uche na-akpachi anya nwere ike mbo mbuli ùgwù onwe onye na obi ụtọ.
Ka i si hụ, mmekọahụ ga-bụghị naanị iduga a obi ụtọ ná ndụ ma a ike otu oke.
Olee otú Iji Kiss Via Zodiac Ama
Olee Otú Ị Pụrụ ntụpọ a adịgboroja Online dịwara Profaịlụ?